Wakiilka Biyaha Rinjiyeynta CW-08 waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo biyaha wasaqda ah ee ka yimaada dharka, daabacaadda iyo dheehida, sameynta waraaqaha, rinjiga, midabka, dyestuff, khad daabacan, kiimikada dhuxusha, batroolka, kiimikada kiimikada, wax soo saarka coking, sunta cayayaanka iyo beeraha kale ee warshadaha. Waxay leeyihiin awood hoggaamineed oo ay ku saari karaan midabka, COD iyo BOD.
Wakiilka Biyaha Sifeeya CW-05
Wakiilka qurxinta CW-05 waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa wax soo saarka midabka biyaha ka saarida qashinka.
Poly DADMAC waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa soo saarista noocyada kala duwan ee shirkadaha warshadaha iyo daaweynta bullaacadaha.
DADMAC waa daahir sare, iskudar, milixda ammonium quaternary iyo cufnaanta sare ee monomer cationic monomer. Muuqaalkeedu waa dareere aan midab lahayn oo hufan oo aan lahayn ur ur. DADMAC waxaa si fudud ugu milmi karaa biyaha. Qaaciddada molikaliska ah waa C8H16NC1 miisaankeeduna waa molikuyuul waa 161.5. Waxa jira alkenyl double bond oo ku jira qaab dhismeedka molecule wuxuuna sameysmi karaa poly polymer toosan iyo dhammaan noocyada copolymers-ka falcelinta polymerization kaladuwan.
PAM-Cationic Polyacrylamide waxaa si ballaaran loogu dabaqay soo saarida noocyada kala duwan ee shirkadaha warshadaha iyo daaweynta bulaacada.
PAM-Nonionic Polyacrylamide waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa soo saarista noocyada kala duwan ee shirkadaha warshadaha iyo daaweynta bullaacadaha.
Polyamine waxaa si ballaaran looga codsadaa soo saarista noocyada kala duwan ee shirkadaha warshadaha iyo daaweynta bulaacada.
Badeecadani waa mid si-wax-ku-ool ah u shaqeynaya polymer-ka soo-baxa. Goobta Codsiga Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa nadiifinta biyaha, daaweynta biyaha wasakhda ah, saxsanaanta kabka, soosaarka waraaqaha, warshadaha dawooyinka iyo kiimikooyinka maalinlaha ah. Faa'iidada 1. Saamaynta daahirinteeda ee kuleylka yar, cufnaanta yar iyo biyaha ceyriinka ee wasakhda ku ah wasakhda dabiiciga ah ayaa aad uga wanaagsan kuwa kale ee flocculants-ka, sidoo kale, qiimaha daaweynta waxaa hoos loo dhigay 20% -80%.
Shayga waa unug macromolecular ma-dabiici ah. Waa budo cad ama dareere aan midab lahayn. Goobta Codsiga Waxaa si fudud loogu dhex milmi karaa biyo leh daxal .Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa sida wax aan fiicnayn oo loogu talagalay daawooyinka iyo qurxinta bulshada (sida antiperspirant) warshadaha kiimikada maalinlaha ah; biyaha la cabbo, daaweynta qashinka warshadaha
Coagulant ee ceeryaanta rinjiga waxay ka kooban tahay wakiilka A & B. Agent A waa nooc ka mid ah kiimikada daaweynta gaarka ah ee loo isticmaalo ka saarista u nuglaanta rinjiga.
Wakiilka Ka Qaadista Birta culus ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa soo saarista noocyada kala duwan ee shirkadaha warshadaha iyo daaweynta bullaacadaha.